Nooca doorasho ee ay xukuumaddu doonayso. | SMC
Home WARARKA MAANTA Nooca doorasho ee ay xukuumaddu doonayso.
Nooca doorasho ee ay xukuumaddu doonayso.
1- Xukummaddu waxay doonaysaa muddo ku darsi laba sano ah.
2-Xukuumaddu waxay doonaysaa doorasho qof & cod ah.
3- Xukuumaddu waxay doonaysaa doorasho Baarlamaan oo heer degmo ah
4- Xukuumaddu waxay doonaysaa doorasho dadban, balse ka duwan doorashadii 2016.
5- Xukuumaddu waxay doonaysaa in guddiga doorashada mudada loogu daro, si ay u diyaar garoobaan.
6- Xukuumaddu waxay doonaysaa in xaalad degdeg ah ay dalka kusoo rogto, doorasho ma dhici karto.
Waxaa hubaal ah ereyadaas dhammaantood inay ku dhaceen dhagaha siyaasiyiinta & shacabka Soomaaliyeed. Waxaa intaa sii dheer, xildhibaanada, siyaasiyiinta ama dadka xog-ogaalka ah ee sida aadka ah ugu xidhan xafiisyada madaxda sare ee dalka, kolka aad weydiiso nooca doorasho ee ay xukuumaddu doonayso, qof walba waxa uu kuu sheegayaa wax ka duwan waxii qofka kale uu kuu sheegay, weliba badankood waxay kuu raacinayaan, madaxweynaha afkiisa ayaan sidaa ka maqlay, hebel iyo hebelna markhaati ayay ka ahaayeen.
Ku darso oo toddobo wasiir iyo xildhibaano xukuumadda taageera, oo meel iskugu tagay ayaa iska dhex waayay hal qof oo tilmaama nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta. Qaarkood waxay kuwa kale weydiiyeen kursigooda (Baarlamaan) goobta la geyn doono. Wasiir aan ka war haynin damaca xukuumaddiisa & halka uu kursigiisi xildhibaan u doonan lahaa, waa xaajo ugub ah oo aan dalkan horay uga dhicin. Hadal & dhammaan, halkaa waxaa kaaga cad in madaxweynaha qudhiisu uu ka walaacsanyahay, ku wareersanyahay ama ka walwalsanyahay, sidoo kale ku kalsoonaan la’yahay damaciisa & nooca doorasho ee dalkan ka dhici doonta.
Waxaana is leeyahay, waa midda sababtay in madaxweynuhu siyaasiyiinta qaarba uu si wax ugu sheego. Mursal, Muudeey, Mahad Cawad & Cabdi Xaashi, toloow iyagu doorasho noocee ah ayay doonayaan, mise xaalkoodu waxa uu marayaa illaahayoow madaxweynaha wax sii, si uu wax noo siiyo? Waxa uu rabo inuu qofku garan waayo, waxay daliil cad u tahay, in qofkaasi uusan garanayn waxa uu kolkaa gacanta ku haysto. Ciid Mubaarak. Mohamed Wadani 24/5-2020
Previous articleDhageyso Dhalinyaro isxilqaamay oo bilaabay inay Dadka u qeybiyaan Waxyaabaha Looga Hortagi kara Feyriska Karoona.
Next articleDHAGEYSO: Xog Culus Oo Laga Helay Diyaaradii Lagu Weeraray Qansax Dheere JBM